Nkà na ụzụ na-eto nduku na-aga nke ọma - Magazin Sistemu Nduku
Zelenit Trade House LLC bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na-akwalite teknụzụ ọrụ ugbo ọgbara ọhụrụ, ihe ndị dị mkpa nke ngwaahịa ọhụrụ dị irè nke ahịrị Vitanoll na Nodix:
Fatịlaịza polymer mmiri nke ihe mejupụtara dị iche iche, nkwadebe microbiological, nkwadebe inyeaka (ndị na-eme wetting, defoamer). N'ime ndepụta nke mmepe ọhụrụ nke achọpụtala ngwa ngwa n'ugbo ihe ọkụkụ, ndị ọkachamara na-akọwapụta TUK - ngwakọta fatịlaịza nke agrochemicals maka mkpụrụ osisi na ọgwụgwọ osisi. Kemgbe 2022, ahịrị TUK gụnyere ngwakọta nke nnukwu na microelements ndị ahọpụtara maka nhazi ọka, mkpo, ihe ọkụkụ ụlọ ọrụ, yana akwụkwọ nri na poteto.
Ngwa nke nkà na ụzụ "Vitanoll" na cultivation poteto
Na 2021, na ndabere nke LLC PK NKS Enterprise (Nizhny Novgorod Region, Shatkovsky District; ụlọ ọrụ ahụ bụ akụkụ nke AFG National Group of Companies), a na-etinye nnwale mmepụta na poteto nke ụdị Kolomba, RS-1.
Nkwadebe dị oke ọnụ (onye na-ahụ maka uto osisi dabere na silicon (ya bụ orthocresoxyacetic acid triethanolammonium salt + 1-chloromethylsilatrane) na biostimulant na-eto eto (ya bụ 62,5% amino acids na peptides) jiri mgbagwoju ọgwụ na-eji teknụzụ Vitanoll dochie ya. atụmatụ nnwale ahụ dị n'ihu njikwa njikwa na mmepe.
N'oge nlele anya nke ubi a na-amụ, e kwuru na osisi ndị dị na nyocha ahụ na-agafe na mmepe nke ịkụ ihe na njikwa (mbụ stolon guzobere na ndochi tuber).
Fig.1. N'ezie mkpụrụ dị na njikwa njikwa bụ 60,2 t / ha, na atụmatụ nnwale - 66,3 t / ha
Na-abawanye uru nke onye na-ehicha ihe site na ịgbakwunye onye na-ahụ maka mmiri mmiri Vitanoll Total
Iji nwekwuo arụmọrụ na uru nke ọgwụgwọ nduku na ndị desiccants, Trade House Zelenit LLC na-atụ aro ịgbakwunye onye na-ahụ maka wetting Vitanoll Total (100% polyalkylene oxide of siloxane, gbanwere na polyester) na ngwọta ọrụ. Ọgwụ ahụ na-enye aka na mmụba dị ukwuu na mpaghara mkpuchi nke elu akwukwo na ntinye ngwa ngwa nke ọgwụ usoro n'ime akwukwo. Ya mere, ọ na-enye ohere iji belata oriri mmiri site na 30-50% na-enweghị ibelata ogo nhazi ma belata ọnụego oriri nke desiccant ruo 25%.
Desiccation nke nduku plantings e rụrụ na Agrosfera LLC (Nizhny Novgorod mpaghara, Dalnekonstantinovsky district). Ụbọchị 6 mgbe ọgwụgwọ gasịrị:
Tel: +7 (812) 900-90-24,
+7 (903) 261-18-91 (ọkachamara agrotechnology)
Tags: TD "Zelenit""Vitanoll" teknụzụ
Rosselkhoznadzor kọwara ihe kpatara mmachibido iwu ibubata poteto na Egypt
Ndi oru ugbo Sakhalin bidoro ibute poteto